पर्सि अर्थात् असोज ६ गते बुधले राशी परिवर्तन गर्दै, यी राशिलाई अत्यन्त शुभ! – MEDIA DARPAN
पर्सि अर्थात् असोज ६ गते बुधले राशी परिवर्तन गर्दै, यी राशिलाई अत्यन्त शुभ!
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ४ आश्विन २०७७, आईतवार १७:५१
नवग्रहमा बुद्धि, वाणी एवम व्यापारको कारक मानिने बुध ग्रहले असोज ६ गते अर्थात् २२ सेप्टेम्बरको दिन साँझ ४ बजेर ५३ मिनेटबाट कन्या राशिको यात्रा समाप्त गरेर तुला राशिमा प्रवेश गर्दैछ। बुध ग्रहको गोचर परिवर्तनले सबै १२ वटै राशिमा असर गर्दछ।
राशिको सप्तम भावमा बुधको गोचर तपाईंको लागि शुभ साबित हुनेछ। तपाईं नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं रोजगारीमा परिवर्तनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने समय अनुकूल छ। वैदेशिक यात्रा वा विदेशी नागरिकताको लागि आवेदन पनि सफल हुनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। विवाह सम्बन्धी वार्ता पनि सफल हुनेछ।
राशिको छैठौं वा शत्रु भावमा बुधको गोचर मिश्रित फलको कारक बन्नेछ। आर्थिक ऋण लेनदेनदेखि सावधान रहनुहोस्। स्वास्थ्यको बारेमा पनि सतर्क रहनुहोस्। गोप्य शत्रुहरू पनि बढ्नेछ। विद्यार्थीहरूले शिक्षा प्रतियोगितामा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ। प्रेम सम्बन्धित मामिलामा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। सन्तानको चिन्ताले सताउन सक्छ। खर्च बढ्नेछ।
राशिको पंचम भावमा बुधको गोचर तपाईंको लागि अत्यन्त शुभ हुनेछ। विद्यार्थीहरुले शिक्षा प्रतियोगितामा राम्रो सफलता प्राप्त गर्नेछन्। सन्तान प्राप्तिको योग बनेको छ। अधुरा रहेका कार्य पूरा हुनेछन्। धर्म कर्ममा मन लाग्नेछ। दाजु-भाइहरूबाट आर्थिक सहयोग मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा उच्च अधिकारीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस्।
राशिको चौंथो भावमा बुधको प्रवेश तपाईंको लागि मिश्रित फलदायी हुनेछ। घर-जग्गा तथा वाहन किन्ने सपना पूरा हुन सक्छ। आमा-बुवाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला। साथी वा आफन्तहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा बिस्तार हुनेछ। नयाँ व्यापार सुरू गर्न वा कुनै नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने समय अनुकूल रहनेछ। समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति र शीर्ष अधिकारीहरूसँग राम्रो सम्बन्धको गठन हुनेछ।
राशिको पराक्रम भावमा बुधको प्रवेश हुँदा अप्रत्याशित परिणाम मिल्नेछ। तपाईंको साहस र पराक्रम बढ्नेछ। सरकारी क्षेत्रबाट पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। भाइहरूसितको सम्बन्ध बिग्रन नदिनुहोस्। नयाँ व्यक्तिहरूसँगको अन्तरक्रिया बढ्नेछ। वैदेशिक कम्पनीहरूमा रोजगारी र विदेशी नागरिकताको लागि आवेदन सफल हुनेछ।
राशिको स्वामी ग्रह धन भावमा प्रवेश गर्दा आर्थिक पक्ष मजबूत हुनेछ। आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ। तपाईं घर वा वाहन खरिद गर्ने सपना पूरा हुनसक्छ। आफ्नो बोली कौशलको साथ अनौठो परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन सफल हुनुहुनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ। अनावश्यक झै-झगडामा नपर्नुहोला, कार्यस्थलमा षडयन्त्रबाट बच्नुहोस्।
बुधको गोचर तपाईंको लागि शुभ साबित हुनेछ। विद्यार्थीहरूले शिक्षा प्रतियोगितामा राम्रो सफलता प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ। नयाँ जोडीको लागि सन्तान प्राप्तिको योग रहेको छ। धर्म र आध्यात्मिकतामा रुचि बढ्नेछ। दैनिक व्यापारिकहरूले राम्रो नाफाको लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ।
राशिको बार्हौं भावमा बुधको गोचरले मिश्रित परिणाम दिनेछ। विदेशी नागरिकताको लागि आवेदन पनि सफल हुनेछ। ध्यानपूर्वक यात्रा गर्नुहोस्। अनावश्यक झै-झगडा तथा विवादबाट टाढा नै रहनुहोला। गोप्य शत्रुहरू पनि बढ्ने छन्। लेनदेनको मामिलामा पनि सतर्क रहनुहोला अन्यथा दिइएको पैसा फिर्ता नहुन पनि सक्छ।
राशिको एघारौँ भावमा बुधको प्रवेशले मिश्रित परिणाम दिनेछ। व्यापार क्षेत्रमा केही अवरोध आउनसक्छ। परिवारका वरिष्ठ सदस्यहरू र शीर्ष अधिकारीहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन नदिनुहोस्। दैनिक व्यापारीहरूको लागि समय बढी अनुकूल हुनेछ। विवाह सम्बन्धी वार्ता सफल हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्धहरु सुदृढ हुनेछ।
राशिको कर्मभावमा बुध ग्रहको गोचरले मान-सम्मान पद-प्रतिष्ठाको वृद्धिको योग बन्नेछ। केन्द्र वा राज्य सरकारसँग सम्बन्धित कामहरू सफल हुनेछन् साथै राजनीतिज्ञ र वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहयोग पनि सम्भव हुनेछ। आमा-बुवाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला। विदेशी कम्पनीहरूमा सेवा आदिका लागि आवेदन दिन सफल हुनेछ। मित्रहरू र आफन्तहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापना हुनेछ।
राशिको भाग्यभावमा बुधको प्रवेश सफलताको प्रतिक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अत्यन्त शुभ रहनेछ। सन्तान सम्बन्धि चिन्ता पनि दूर हुनेछ। धर्म कर्ममा मन लाग्नेछ। तपाईंको कामको सराहना हुनेछ। दाजु-भाई बीच मदभेद हुनसक्छ। आध्यात्मिक उन्नति तर्फ अग्रसर भइनेछ।
राशिको अष्टम भावमा बुधको प्रवेशले स्वाथ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। तपाईंको प्रसिद्धि र प्रभाव बढ्नेछ तर कार्यक्षेत्रमा षडयन्त्रको शिकार हुनबाट जोगिनुहोस्। अनावश्यक वाद-विवादबाट बच्नुहोला। अपेक्षित कामको समाधान हुनेछ, साथै ऋण दिएको पैसा पनि फिर्ता हुने सम्भावना छ।
आज उपत्यकामा ७ सय बढी संक्रमित, देशभर हजार भन्दा बढी ! कुन जिल्लामा कति ? [विवरण सहित]
सार्वजनिक यातायात: ‘न स्यानिटाइजर न सामाजिक दूरी कायम, भाडा मात्र बढी’
यस्तो छ संघीय सांसदहरूको सुधारिएको लोगो
१४ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आलुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । थोक बजारमा ६४देखि एक सय रुपैयाँसम्म कारोबार…
प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ : मोदीले दूत पठाउँछु भने, सामन्त पो आएछन्…
प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ : मोदीले दूत पठाउँछु भने, सामन्त…